kabsado faylasha aad lumay drive qalin
Small ku filan in lagu shubaa jeebka drive ka USB flash sidoo kale loo yaqaan drive qalinka ayaa la soo saaray si loo hubiyo in nolosha user waxaa sahlan in ilaa xad ka weyn. Laga soo bilaabo gaadiidka xogta in dayactirka nidaamka iyo faa'iidooyinka kale ee waxtar leh gabal hardware tani sii socoto in ay suuqa xukumaan la walba marayay sida shirkadaha loo hubiyo in lagu daydo iyo aad u badan oo aan la soo bandhigay oo keliya laakiin arrin guud waxaa sidoo kale loo qaaday heerka ku xiga. Si kastaba ha ahaatee waa inuusan marna waxaa lagula talinayaa in ay sii files muhiim ah iyo dukumentiyada kale ee drive galay sida ay u dayacan tahay inay arrimo badan iyo dhibaatooyinka sababi gaartay Xogta xasaasiga ah ilaa xad weynaa oo mararka qaarkood irrecoverable.
Arrimaha in uu keeni karo khasaaraha xog ku saabsan drive qalinka
Waxaa jira waxyaabo fara badan oo keeni in arrintan oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in ay arrimaha hoos ku xusan waxaa lagu hayaa tixgelin sameeyo si tallaabada la qaadi karo si waafaqsan sida doonista iyo rabitaan isticmaalaha:
1. Baadi The formatting keenaya drive ay u format
2. tirtirka ah Shil faylasha ah
3. Power isbedbedelka iyo fashilaad
4. saaraan baadi hardware sidaa daraadeed waxa aan la samayn karaa
5. Virus iyo arrimaha furin la xiriira
6. sababo Kaladuwan
7. Isticmaalka badan ee qalabka hardware kaas oo keena in ay gebi ahaanba wax tarkeeda.
5 siyaabo in dib laga badiyay files ka drive qalinka
Tobanaan kun oo ka mid ah qalabka la soo saaray arrintan la xiriira si loo hubiyo in arrinta guud ahaan waxaa loo hagaajin iyo user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay marka ay timaado soo kabashada xogta. Hoos talinayaa waa 5 qalab loo isticmaali karo si loo hubiyo in xogta ammaanka iyo recoverable oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xusay in barnaamijyada oo dhan waa in la isticmaalo iyada oo ay kormeerayaan khabiir haddii user waa inuusan ahaan duurka u soo kabashada xogta waa:
Waa aalad ugu isticmaalay oo lagala soo bixi marka ay timaado soo kabashada xogta iyo sababta ugu weyn waa in horumarinta ku hawlan yihiin si loo hubiyo in qalabka weli ilaa sumaddii sida ay tahay doonista iyo rabitaanka dadka isticmaala ee. Kabashada Xogta dhex Recuva maaha wax dhibaato ah oo dhan sida barnaamijka waa mid fudud in la isticmaalo iyo siddo oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
• Waxa uu caddeeyay in uu freeware ugu fiican oo amaan ah soo kabashada xogta.
• version la qaadan karo ayaa sidoo kale la sameeyey si loo qaboojin users ah.
• Mararka qaarkood user laga yaabaa in ay adag tahay in interface ka akhrisan
• dajinta ee barnaamijka ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah files dheeraad ah.
2. kabashada File Puran
Oo weliba qalab kale oo awood badan kaas oo u hubinaya in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira iyo xogta la soo kabsaday oo aan wax arrimaha abuurka dheeraad ah. Barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in xijaab kasta oo drive ee la doortay waxaa la marsiiyey iyo user la siiyo la soo saarka ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira iyo file lunsan oo laga helo ixtimaalka sare leh.
• Barnaamijka software soo saaro karo files badan hal mar.
• waxtarka guud ee barnaamijka ku dhow yahay inuu 100% sida 99.7% ee wadarta guud.
• saarista file waxaa loo sameeyaa hab farsamo oo user a laylis ma fahmi karo.
• Ma jiro version qaadi karo barnaamijka.
3. daloolin digsi
Waa barnaamij ah oo uu soo qiimeeyo sare ay users iyo sababta ugu weyn waa xaqiiqada ah in ay u shaqayso in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada oo la hubiyo in tusaha xididka ayaa sidoo kale ka heli si aad u hubiso in faylka la helo oo soo bandhigay si user ah. Barnaamijka ayaa sidoo kale isbedel sida ay tahay doonista iyo rabitaanka isticmaalaha.
• fudud ayaa si ay u isticmaalaan qaababka soo jiitaan dadka isticmaala ku.
• The waxtarka barnaamijka guud ahaan waa cabsi iyo waxaa jira fursad sare oo soo kabashada file.
• Macluumaad file waxaa aan lala wadaago user ee inta la soo kabsaday
• Barnaamijka waxaa aan si joogto ah updated sidii ku habboonayd.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ayaa xaqiijiyay in freeware waa wax aan la dafiri karin in kiis kasta. Waxaa sidoo kale in la xuso in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada farshaxanka lagu daro si ay u hubiyaan in barnaamijka loo abuuray. Waxaa lagu hayo xirfadlayaasha khabiir iyo sabab la mid ah soo kabashada xogta la isticmaalayo qalab tani waa mid aad u fudud.
• meel loo xirxiro ma aha waaweyn oo dhan.
• xogta ayaa la soo bandhigay hab aan user garanayo.
• Nasiib darro ma jiraan wax version la qaadi karo oo dhan
• Barnaamijku wuxuu had iyo jeer ku xayiran oo waa dhibaato in ay tahay in wax laga qabto.
Sida magaca gaysteen oo u furmay sanduuqa soo kabashada xogta ka mid ah in la khasaaray iyo bandhigaysaa files ah si la mid ah, taas oo ay ka lumeen. Barnaamijka ayaa waxaa lagu qiimeeyay sare by users iyo sabab la mid ah saamiga download sidoo kale sare ee arrintan la xiriira.
• Barnaamijka waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo ay fuliso.
• Tani waa mid ka mid ah barnaamijyada yar in ay fulin istaraatijiyad file meelaynta.
• The rakibo software dheeraad ah oo ay tahay arrinta ugu weyn ee arrintan la xiriira.
• interface guud ee barnaamijka waxay u baahan tahay maalinimada berito
Ugu wanaagsan ee ay u doortaan
Waxaa la odhan karaa iyada oo aan wax shaki ah in Wondershare kabashada xogta waa kan ugu khayr iyo doorashada ugu xaragada badan marka loo eego dhammaan barnaamijyada in lagu kor lagu soo sheegay oo dhan waa sabab u yahay sababaha soo socda in Waa shardi in la tixgeliyo in arrintan la xiriira.
• Barnaamijka wuxuu leeyahay mid ka mid ah ugu fududahay in la isticmaalo hababka saaxir in aan la hirgeliyo barnaamij kasta oo kale.
• Qaab dhismeedka barnaamijka guud waxaa dhisay users laylis ah oo waa dhab dhalashada ah in inta badan dadka isticmaala ma casriga ah ugu xeel dheer oo dhan.
• user ayaa sidoo kale isticmaali kartaa sifaatka aad u sareeya oo ah barnaamijka iyo in sidan this piece casriga ah laga cabsado waa inuu xaqiijiyo in qaybaha labada user la daboolay.
• Muuqaaladan barnaamijka ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah shaqo caga oo koobantahay natiijada iyo markii laga reebo user ah.
• Barnaamijku waa mid aad u khafiif ah oo ay sidoo kale hubineysaa in khayraadka nidaamka yar ay wada baabba'aan.
Sidee inuu ka soo kabsado files lumay ka Pen Drive iyadoo la kaashanayo Wondershare Data Recovery
1. Laga soo bilaabo URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in barnaamijka la soo bixi oo ku rakiban.
2. nooca file waa ka dibna in la soo xulay
3. caga The ie drive qalinka markaas waa in la soo xulay:
4. kabsaday files yihiin ka dibna in la falanqeeyay si loo hubiyo in ugu wanaagsan ee la doortay:
> Resource > Ladnaansho > 5 siyaabo inuu ka soo kabsado aad files lumay ka drive qalin